true public-relations /zu-ZA/tools-for-life/public-relations/steps/what-is-public-relations.html read 4 7 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/public-relations_zu_ZA.jpg Izisekelo zobuHlobo noMphakathi
Njengoba kushiwo ekuqaleni kwalezi zifundo, kubalulekile ukwazi nokusebenzisa izinga leqiniso lomphakathi oxhumana nalo.
Ukwenza ucwaningo kukusiza uphumelele ekwenzeni lokhu.
Kubuhlobo nomphakathi igama elithi ucwaningo lisho ukuhlola ngokucophelela umbono womphakathi maqondana nomqondo, umkhiqizo, ingxenye ethile empilweni noma esinye isifundo.
Ngokwenza ucwaningo eqenjini, umuntu nomuntu, ungathola umbono wokuphawula komphakathi ngesihloko ngokufaka izimpendulo ezigabeni ezifanayo (amaqembu afanayo) futhi ubone ukuthi liyini iphesenti eliphakeme lezimpendulo ezithandwayo.
Kepha kusho ukuthini lokhu kuwe ngokwakho? Kungenzeka ukuthi ungajahi ukuphuma futhi uqashe uchwepheshe wezocwaningo noma inkampani yocwaningo ukuze iqoqe imibono ngendaba emayelana nomakhelwane endaweni osanda kuthuthela kuyo noma lokho abafundi abakucabangayo ekilasini noma ukuthi yini abasebenzi emsebenzini abangayicabanga ngeprojekthi yakho.
Iqiniso ngukuthi, ungazenzela ucwaningo lwakho kalula.
Ucwaningo lwenziwa ukuthola ukuthi yiziphi izinkinobho iqembu elinazo. Ekuhloleni, igama elithi inkinobho lisho isihloko noma ibinzana noma umqondo oveza iqiniso lomphakathi othile. Kuyinto engokoqobo kubantu abaningi kulelo qembu futhi engasetshenziswa ukuthola impendulo nokuthola isivumelwano. Futhi kubuhlobo nomphakathi okufunayo yisivumelwano nokubambisana ngezenzo zakho ebantwini abaphakathi kweqembu.
Ocwaningweni, ubuza abantu ukuthola umbono wabo kokuthile. Inkinombo ingxenye yolwazi ebaluleke kakhulu oyithola kulesi senzo. Yimpendulo enikezwe izikhathi eziningi embuzweni wakho woncwaningo. Futhi ngokusebenzisa leyo nkinobho, uzothola isivumelwano esivela kubantu futhi uzothola impendulo.
Ucwaningo lungabhalwa futhi ukukutshela ukuthi yini abantu abangayithandi noma abayizondayo ngempela.
Ngokwazi iqiniso lomphakathi olithola ngocwaningo, kwenzeka kalula ukubazisa ngemibono ofuna bayamukele—ngamanye amazwi, ungadlulisa umyalezo wakho ngoba ungawubeka ngendlela abantu abazimisele ukwamukela ngayo.
Ukufingqa lokhu, lawa amaphuzu abalulekile okudingeka uwaqonde:
Umlayezo ukuxhumana, umcabango, umqondo ofuna ufinyelele kubathameli noma uphakathi.
Kusetshenziswa inkinobho ukuthola isivumelwano somphakathi sokuzwa umyalezo.
Umlayezo nenkinobho akuyona into efanayo.
Ngokwenza ucwaningo nokuthola inkinobho efanele, ungasebenzisa leyo nkinobho ukuthola isivumelwano futhi ngenxa yalokho uthole impendulo.
Ukuze wenze ucwaningo olufanele futhi usebenzise imininingwane ngendlela yokukhiqiza imiphumela oyifunayo, udinga ukuqonda injongo yocwaningo, kanye ne-ARC futhi ne-ARC Triangle. Kudinga ukuqonda ukuthi liyini iqiniso.
Lapho wenza ucwaningo, usebenzisa i-ARC Triangle. Futhi-ke, uphinde usebenzise i-ARC Triangle ukufaka imiphumela yonhlolovo ukuyisebenzisa.
Kuhamba kanjena: ukuxhumana nabathameli noma umphakathi ngokusebenzisa ucwaningo, ukusondelana ukuze uthole ukuthi iqiniso lalabo bathameli linjani. Iqiniso yisivumelwano sokuthi kuyini. Ngakho-ke isizathu sokwenza ucwaningo ukuthola ukuthi abathameli noma umphakathi bazovumelana nakho.
Usebenzisa leloqiniso ekuhleleni ukukhuthaza noma okunye ukuxhumana ukuthola isivumelwamo sabo sokuzwa umlayezo. Njengomphumela, uzophakamisa ukusondelana komphakathi nento, umqondo noma iphrojekthi oyithuthukisayo.
Yilokho okulula kwayo. Kepha kuzoba lula kuwe kuphela, uma uyiqonda i-ARC Triangle. Ngaphandle kweqiniso noma isivumelwano esithile, ukuxhumana ngeke kufinyelele emphakathini wakho futhi ngeke kube khona ukusondelana.
Kwenziwa ucwaningo ukuze kutholakale isivumelwano. Ucwaningo alwenziwa nganoma iyiphi enye injongo. Sekwenziwe ukusungula isivumelwano nezithameli.
Isibonelo, ubuza abantu abayishumi noma abangamashumi ayikhulu ukuthi yini abayifunayo kakhulu kumathayi wezimoto bese bekutshela ukuthi ithayi kufanele “ihlale isikhathi eside.” Leyo yinkinobho. Lokho kuyi qiniso, iphuzu lesivumelwano kumathayi ezimoto phakathi kwalowo umphakathi. Ngakho-ke usebenzisa leyo nkinobho ngalowo umphakathi futhi bayobe belalela lokho okushoyo ngamathayi ezimoto.
Izinkinobho zinokusetshenziswa kwazo kepha sinentshisekelo kakhulu kumyalezo. Umlayezo uyinto ebaluleke kakhulu kunoma iyiphi ingxenye yokukhangisa noma ukuxhumana kwe-PR. Izinkinobho kumane kunguwoyela (into evumela izinto ukuthi zenzeke ngokushelela futhi kalula) ongakusebenzisa ukukhipha umyalezo wakho.
Ungalwenza Kanjani Ucwaningo
Izenzo ezibandakanya ukwenza ucwaningo zilula. Into yokuqala ukucubungula imibuzo ozoyibuza umphakathi ukuze uthole out ukuthi yini efunwayo futhi edingekayo, edumile noma engathandwa noma yini ofuna ukuyithola out.
Ngemuva kokuba imibuzo isetshenzisiwe, iyabhalwa noma ithayishwe ephepheni ukuze umhloli ayisebenzise. Uma wenza ucwaningo edolobheni lapho kuzobuzwa khona abantu abaningi, kungasiza ukucindezela amafomu amaningi ocwaningo. Kodwa-ke, konke okudingekayo ocwaningweni oluningi yibhodi lokunamathisela elinamaphepha amaningi angenalutho namapeni amaningana (ukuze ungaphelelwa uyinki phakathi nocwaningo).
Ikhasi lemibuzo yocwaningo libekwa ngaphezulu kwephepha bese liphendulwa ngenkathi kubhalwa amanothi ezimpendulo.
Ukuqala ucwaningo, umane ufike kumuntu futhi ngendlela enobungane, uzazise futhi ubuze ukuthi ungalwenza ucwaningo nabo.
Uma umuntu ebuza imininingwane eminingi mayelana nocwaningo noma ukuthi ingani lwenziwa, imibuzo yakhe iyaphendulwa bese kuqaliswa ngocwaningo.
Buza umuntu umbuzo wokuqala, pheqa ikhasi lemibuzo bese ubhala phansi impendulo ngasemuva. Qiniseka ukubhala izinombolo zezimpendulo ukuze zihambisane nezinombolo zemibuzo oyibuzayo.
Akudingeki ukuthi ubhale wonke amagama njengoba umuntu ekhuluma nawe, kodwa uthole amaphuzu abaluleke kakhulu. Uzothola, ngokulokhu ujwayela ukucwaninga, ungabhala phansi cishe yonke into.
Ngemuva kokuba umuntu ephendule umbuzo wokuqala, mbonge bese uya embuzweni olandelayo.
Ekupheleni kocwaningo, mbonge lowo muntu. Umuntu kungenzeka ukuthi akubonge nawe ngalesi sikhathi ngoba abantu bayathanda ukubuzwa umbono wabo ngezinto. Futhi ukuba nomunye umuntu okulalelayo ngempela kuyinto engavamile futhi akuyona into ehlala yenzeka kubantu abaningi.
Bese uya kumuntu olandelayo uphinde inqubo efanayo. Yizo-ke lezi izinyatheleo zokuzwa izimvo zabantu.
Uma ucwaningo selenziwe izimpendulo kufanele zibhalwe phansi ukuze zisetshenziswe. Ukuthebhuletha kusho ukuhlela imininingwane ngendlela ehlelekile.
Lapho uthebhuletha izimpendulo zocwaningo, uhlela imininingwane ngendlela ehlelekile ukuze ubheke ngokucophelela imiphumela yocwaningo. Ufuna ukuhlola izimpendulo ukuze uthole ukuthi iqiniso lingelithini labantu obubacwaninga.
1. Bala ukuthola inani labantu abahloliwe.
2. Sebenza izigaba ezahlukahlukene (amaqembu) ezimpendulo zombuzo ngamunye ngokufaka kuhlu izimpendulo kafushane njengoba uqhubeka nocwaningo.
3. Uma izigaba sezenziwe zasetshenzwa kahle, uzokwazi ukufaka uphawu eduze kwesigaba esifanele, okusho ukuthi kunempendulo eyodwa yohlobo olufanayo.
4. Uma zonke izimpendulo seziklelisiwe, bala inani lezimpendulo esigabeni ngasinye embuzweni ngamunye.
5. Thola iphesenti lesigaba ngasinye ngaphansi kombuzo ngamunye. Lokhu kwenziwa ngokuhlukanisa inani lezimpendulo kuleso sigaba ngenani eliphelele lezinhlolovo nokuphindaphinda ngo-100.
Isibonelo, ake sithi unezimpendulo eziyi-1,500 ebezifana nombuzo owodwa futhi inani lenhlolovo yakho ingu 2,500.
1,500 ihlukaniswe ngo 2,500 = 0.6 x 100 = 60%
Lokhu kusho ukuthi amaphesenti angama-60 anikeze leyo mpendulo efanayo.
6. Iphutha kuphela ongalenza ukungaboni lapho ezinye izimpendulo zifana. Uma wenza leli phutha, unezigaba eziningi ezahlukahlukene ezingadingekile.